Global Voices teny Malagasy · 12 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 12 Novambra 2018
Amerika Latina12 Novambra 2018
Eoropa Afovoany & Atsinanana12 Novambra 2018
Azia Atsimo12 Novambra 2018
Ny fanehoan-kevitr’ireo firenena miteny Portiogey tamin’ny naha-voafidy an’i Jair Bolsonaro ho filoham-pirenena
Brezila12 Novambra 2018
Tsy nandalo fotsiny ho an’ireo mpiteny Portiogey mitovy aminy ny fifidianana an’i Jair Bolsonaro ho filohan’i Brezila .
Afrika Mainty12 Novambra 2018
Sri Lanka: Maneho ny Heviny momba ilay Famonoana an'i Lakshman Kadirgamar ireo Bilaogy
Novonoin'ireo mpitily tao Colombo i Lakshman Kadirgamar. Maneho ny heviny ireo bilaogy.
Vaovao momba ny Fahalalahana Miteny
Ireto ny fivoaran'ny rahona manembatsembana ny fahalalahana miteny voarakitry ny Reporters Sans Frontières sy ny Human Rights Watch tanatin'ny herinandro lasa teo.
Misy lohahevitra ara-tsosialy mahaliana sy mampiady hevitra resahana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana tamin'ity herinandro ity.
Inona no niseho tamin'ny Skype tany Shina?
Azia Atsinanana12 Novambra 2018
Voalaza fa nosakanan'ny China Telecom ilay mpanome tolotra Aterineto (FAI) lehibe indrindra any Shina noho ny antony ara-toekarena, farafahakeliny tany amin'ny tanàndehibe atsimo atsinanan'i Shenzhen ny Skype, ilay programa VOIP mahomby izay nahazo laza iraisam-pirenena no voasakana.